ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ နဲ့ CNG(Compressed Natural Gas) အမျိုးအစားထဲကဘယ်ကားကိုဝယ်သင့်လဲ? – AutoMyanmar
ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ နဲ့ CNG(Compressed Natural Gas) အမျိုးအစားထဲကဘယ်ကားကိုဝယ်သင့်လဲ?
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်ကားဝယ်သူတွေဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုများပြားလာပါပြီ။ ကားဝယ်/ရောင်း လုပ်နေကျလူတွေဆိုသိနေမှာဖြစ်ပေမယ့် Car Market ထဲကိုအခုမှခြေလှမ်းစဝင်ပြီး ကားဝယ်တော့မယ့်လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိလာပါပြီ။
ဘာ Body အမျိုးအစားကားကိုဝယ်သင့်လဲ? ဘယ် Brand ကိုဝယ်သင့်လဲ? ဘာလောင်စာအမျိုးအစားကားကိုဝယ်သင့်လဲ? ကားအသစ်(သို့) အသုံးပြုပြီးသားကားကိုဝယ်သင့်လား? စသည်ဖြင့် မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိနေမှာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ အဲ့ဒီမေးခွန်းအများကြီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ဘာလောင်စာအမျိုးအစားကိုဝယ်သင့်လဲ?” ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် နဲ့ CNG အမျိုးအစားတွေထဲမှာ ဘယ်ဟာကတော့ကောင်းတယ်၊ ဘယ်ဟာကတော့ဆိုးတယ်လို့တော့မရှိဘူးဗျ။ မိတ်ဆွေရဲ့ Type နဲ့ အခြေအနေ ကိုလိုက်ပြီး ဝယ်သင့်တဲ့လောင်စာအမျိုးအစား ကား ကပြောင်းလဲသွားမှာပါ။
ဓာတ်ဆီကား ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် ကားအင်ဂျင်ချောမွေ့ပြီး ကောင်းမွန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားကိုလည်းအကြာကြီးနေမှပြုပြင်ရမှာဖြစ်သလို ကားအင်ဂျင်ကလည်းငြိမ်သက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားအင်ဂျင်ငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ အသံဆူဆူညံညံကြီးထွက်မနေဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။ အဲ့လိုဟန်ကျကျစီးချင်ရင်တော့ မိတ်ဆွေဘက်ကပေးဆပ်ရမှာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတော့ ဘက်ဂျက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဓာတ်ဆီဆိုတဲ့အမျိုးက လောင်စာ ၃ ခုထဲမှာစျေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကုန်တာကလည်းမြန်နေတာကြောင့်ပါ။
Taxi မောင်းပြီးအသက်မွေးဝှမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့သူတွေ၊ ခရီးဝေးတွေမကြာခဏမောင်းရတဲ့လူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ ဒီဇယ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဇယ်ကားဟာ ဓာတ်ဆီလောက်ကုန်တာမမြန်တဲ့အပြင် တန်ဖိုးကလည်း ဓာတ်ဆီလောက်မရှိတာကြောင့်ပါ။ အဲ့လိုကောင်းတဲ့အချက်တွေအတွက် မိတ်ဆွေဘက်ကပေးဆပ်ရမှာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မကြာခဏပြုပြင်ရတာပါ။ ဒီဇယ်အသုံးပြုတဲ့ကားတွေကကြာလာရင် ကားအင်ဂျင်အထိအနာဖြစ်တာကြောင့် ကား အင်ဂျင်ကိုမကြာခဏပြုပြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မပြုပြင်ပဲထားတာကြာလာရင် အင်ဂျင်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒီဇယ်အသုံးပြုတဲ့ကားတွေက CO2 နဲ့ NOx ဓာတ်ငွေ့တွေကိုလေထုထဲပိုပြီးထုတ်လွှတ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
CNG ကတော့ခေတ်ကုန်သွားပြီလို့တော့ပြောကြတယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့ကားတွေမှာ CNG ကားကတော်တော်ရှားသွားတာကြောင့်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် CNG အသုံးပြုတဲ့ကားပိုင်ရှင်(သို့) ဝယ်မယ့်လူတွေအတွက် CNG အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိသလောက်ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ မြို့တွင်းပိုင်းပဲ သွားလာနေတဲ့လူဆိုရင် တစ်နေ့ကို ၄၅ km လောက်ပဲရှိမှာပါ။ အကယ်၍မိတ်ဆွေကမြို့တွင်းပိုင်းလောက်ပဲသွားလာမယ်ဆိုရင် CNG ကားကတော့ မိတ်ဆွေအတွက်အံကိုက်ပါပဲ။ Gas ဖြစ်တဲ့အတွက် အကုန်အကျသက်သာမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ အဲ့တော့ကားလည်းစီး၊ ပိုက်ဆံလည်းစုမိတာပေါ့။ CNG ကားနဲ့ Highway ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သွားလို့ရပေမယ့်ပြဿနာတွေကတော့ရှိနေပါတယ်။ CNG ကားဟာ ကီလို ၁၀၀ ကျော်လောက်သွားပြီးရင် Gas Tank ကြီးကိုပြန်ပြန်ဖြည့်နေရမှာဖြစ်တာကြောင့်လိုရာခရီးကို မရောက်တော့တဲ့ပြဿနာပါ။ နောက်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ Gas Tank ကြီးကအနောက်မှာနေရာယူထားတာဖြစ်တာကြောင့် ခရီးအတွက်ပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်တာပါ။
ဒါတွေကတော့ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ နဲ့ CNG ကားအမျိုးအစားတွေရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ နဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ type၊ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး အဆင်ပြေမယ့်ကားအမျိုးအစားကိုဝယ်စီးကြပါ။ ဆွေးနွေးချက်တွေမှာ အမှား(သို့) မပါမိခဲ့တဲ့ Point တွေရှိရင်လည်းအောက်က Comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေ။
Image Source : media.suzuki.co.uk